जिम र यौन जीवनबीच के सम्बन्ध छ ? « Globe Nepal
जिम र यौन जीवनबीच के सम्बन्ध छ ?
प्रश्न- म २८ वर्षकी कामदार महिला हुँ। मैले धेरै मानिसहरूबाट सुनेको छु कि दैनिक जिम जाँदा शरीरलाई तन्दुरुस्त र ठीक राख्छ, तर यसले यौन जीवनलाई स्वस्थ बनाउन पनि मद्दत गर्छ। तसर्थ, आफूलाई फिट राख्न र आफ्नो यौन जीवनलाई खुशी र स्वस्थ राख्न यसलाई आफ्नो दिनचर्यामा समावेश गर्नुपर्छ। म जान्न चाहन्छु कि जिम जानु साँच्चै राम्रो यौन जीवन हो ?
उत्तर- हो, जिम गएर यौन जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले सहि सुन्नु भएको छ । दैनिक जिम जाने अन्य धेरै फाइदाहरू छन्। यो हाम्रो स्वास्थ्य को लागी धेरै लाभदायक छ। जिममा दैनिक व्यायाम गर्नाले शरीरलाई तन्दुरुस्त र तन्दुरुस्त मात्र राख्दैन, यसले हाम्रो यौन जीवनलाई स्वस्थ बनाउन पनि मद्दत गर्छ।
जिम जानुका फाइदाहरू-
चरम उत्तेजित हुन मद्दत गर्दछ
जिम र यौन सम्पर्कमा गरिएको अनुसन्धानका अनुसार नियमित रुपमा जिम गएर व्यायाम गर्ने महिलाहरु यौन सम्पर्क गर्दा छिट्टै उत्तेजित हुन्छन् र चरम उत्तेजित हुने गर्दछ । किनभने व्यायामले उनीहरुमा सेक्स हार्मोनको स्तर बढाउँछ, जसका कारण उनीहरु राम्रो सेक्स पार्टनर साबित हुन्छन् ।नियमित व्यायाम गर्नाले शरीरको उर्जा स्तर बढ्छ । जसले सेक्सको समयमा तपाईलाई थप उर्जावान राख्छ, जसका कारण तपाई सेक्सको बढी आनन्द लिन सक्नुहुन्छ ।
शरीर टोन र आकर्षक बन्छ
मोटोपन स्वास्थ्य र यौन दुवैको लागि हानिकारक छ। मोटोपनाका कारण मानिसलाई छिट्टै थकान महसुस हुन थाल्छ र मोटोपनाबाट पीडित व्यक्तिले यौनसम्पर्कका क्रममा आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन् । फलस्वरूप, ऊ निम्न स्तरमा पुग्छ र ऊ सेक्सबाट टाढा रहन थाल्छ। जिममा व्यायाम गर्दा मोटोपना कम हुन्छ । यो स्पष्ट छ कि स्लिम-ट्रिम र टोन्ड शरीरले सबैलाई आकर्षित गर्दछ। जिम गएर एब्स टोन्ड हुन्छ, हात खुट्टाको मांसपेशी बलियो हुन्छ । महिलाको बाक्लो कम्मरमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसो कम हुन थाल्छ, जसका कारण कम्मर पातलो हुन थाल्छ र शरीरमा कर्भ आउन थाल्छ । यौनसम्पर्कका ती घनिष्ट क्षणहरूमा पार्टनरको आकर्षक शरीरले अर्को पार्टनरलाई नशामा पार्नमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सास नियन्त्रण गर्न सिकाउँछ
व्यायाम र योगले तपाईंलाई आफ्नो सास नियन्त्रण गर्न सिकाउँछ। सही सास फेर्न प्रविधिको साथ, तपाईं सेक्सको अवधि र आनन्द दुवै बढाउन सक्नुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको स्तर बढाउँछ
टेस्टोस्टेरोन हार्मोनले प्रेमको घनिष्ठ क्षणहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले सेक्सको चाहना जगाउन र गतिविधि बढाउन जान्दछ। अनुसन्धानका अनुसार नियमित व्यायाम, विशेषगरी जिममा स्क्वाट गर्दा टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढ्छ ।
‘तन्त्रविद्या र स्नायुविज्ञानको अन्तरसम्बन्ध’
जिल्ला अस्पताल लमजुङले पाएन स्वास्थ्य बिमाको एक करोड रकम